ထီရလဒ်များ, ထီပေါက်ခြင်းနှင့်တောလည်ရာ | Lottery.com
ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအိတ် - ဇူလိုင်လ 14, 2020
သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုခြေရာခံ, သင်အနိုင်ရသည့်အခါသတိပေးချက်အရနှင့်သွားလာရင်းကစား။ app ကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ
သင်နေထိုင်သောပြည်နယ်များရှိ Powerball၊ Mega Millions နှင့်အခြားအရာများကိုကစားနိုင်သည်။ ရာပေါင်းများစွာသောအခြားထီဂိမ်းများအတွက်နံပါတ်များ၊ ရက်စွဲများနှင့် jackpot စုစုပေါင်းများကိုရနိုင်သည်။
သင်၏ကံကောင်းသည့်နံပါတ်များကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ်နှစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်အမြန်ရွေးပါ။ ကိုအသာပုတ်, အသာပုတ်, လက်မှတ်!
တစ်ကြိမ်တွင်လက်မှတ် ၅၀ အထိဝယ်ယူပါ။ ကျနော်တို့အဲဒီကနေအရာအားလုံးကိုကိုင်တွယ်မယ်သင်အနိုင်ရသောအခါသင်သိပါစေ!
မင်းရဲ့နိုင်ငွေ ၁၀၀% ကိုမင်းသိမ်းထားတယ်။ သင်၏အနိုင်ရရှိမှုသည်သင်၏ငွေလက်ကျန်တွင်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီးသင်လက်မှတ်များထပ်မံကစားနိုင်မည်သို့မဟုတ်ငွေသားထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကြီးမားသော jackpot ကြီးကိုဝင်နိုင်လျှင်ကံကောင်းခြင်းသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးရွေးနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။